एक सय छ वर्षीय वृद्ध आँखा देख्न पाएपछि खुशि – Click Khabar
चितवनः भरतपुर आँखा अस्पतालको बहिरंग सेवामा मंगलबार बिहान भेटिनु भएका एक वृद्ध निकै खुशि देखिनुहुन्थ्यो । १ सय ६ वर्षको उमेरमा एक साता अघि आफ्नो देव्रे आँखाको मोतीयाबिन्दुको शल्यक्रिया पछि आँखा देखे संगै उहाँमा खुशि थपिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ क्षेत्रपुर निवासी पुननारायण श्रेष्ठको यो उमेरमा सफल शल्यक्रिया भए पछि उहाँ निकै खुशि हुनु भएको छ । पत्रकारहरुले बा मान्छे चिन्नुहुन्छ भन्न नपाउँदै उहाँले भन्नुभयो “तपाईले लगाएको जकेट कालो रहेछ । पर बसेका हरुलाई पनि देखेको छु ।”
एक वर्ष अघि देखि धमिलो हुँदै गएको आँखाले पछिल्लो समय देख्न छाडेपछि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई आँखाको शल्यक्रिया गर्न नजिकै घर भएकी भरतपुर आँखा अस्पतालमा कार्यरत छायाँ श्रेष्ठले सुझाब दिनुभयो । त्यतीमात्रै होईन छायाँले अस्पतालकी डा. मारीया गौतम संग परामर्श गरेर शल्यक्रियाको प्रबन्ध पनि मिलाईदिनु भयो ।
सफल शल्यक्रिया पछि निकै उत्साहीत हुँदै बृद्ध श्रेष्ठले आफुले जीवनमा पुनः आँखा देख्ने अबसर पाएको भन्दै खुशि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो “उपचार गरे हुँदो रहेछ ।”उहाँ संगै रहनु भएका जेठा छोरा नाराद श्रेष्ठले डोराएर हिड्नु पर्ने बुबा आँफै हिड्न थालेपछि निकै खुशि हुनु भएको बताउनुभयो ।
अस्पतालका चिकित्सक डा. मारिया गौतमले बृद्धहरुको शल्यक्रिया कठिन हुने भए पनि बिरामीले चाहेमा सफल शल्यक्रिया गर्न सकीने बताउनुभयो । आफ्नो जीवनमा यती धेरै उमेरको व्यक्तिको शल्यक्रिया गरेको भने पहिलो भएको उहाँले बताउनु भयो । उपचारमा उमेरले नछेक्ने भएकाले आत्मबल उच्च गरेर उपचार गर्न आउन गौतमले आग्रह गर्नुभयो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेका अनुसार भरतपुरमा रहेको मुख्य अस्पताल र भरतपुर हाइटमा रहेको बहिरङ्ग विभागमार्फत एक लाख १८ हजार ४५५ जना बिरामीको आँखाको उपचार गरिएको हो। नौ वटा आँखा उपचार केन्द्रमार्फत पनि अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ।
विभिन्न जिल्लामा गरिएका शिविरमार्फत २२ हजार ९८५ को आँखाको उपचार गरिएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित सो अस्पतालले गत आवमा पाँच हजार ६९६ को आँखाको शल्यक्रिया गरिएको थियो । अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णराज धरेलका अनुसार हरेक वर्ष बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। बृद्धहरुको पनि शफल शल्यक्रिया हुने भएकाले अन्धकारमा जीवन नबिताउन सबैमा आव्हान गरिएको बताउँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरुको उपचारमा अस्पतालले प्राथमीकता दिएको बताउनुभयो ।
गौतमले दाहालको फोटो हटाउन लगाए